जलवायु चुनौती र नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियामा मात्रै ४ करोड मानिस गरिबीमा फस्न सक्छन् । हाम्रो ग्रह जोगाउने चुनौती सरकारले मात्रै थेग्न सक्दैन ।
फाल्गुन १३, २०७७ आलोक शर्मा
त्यसैले पनि, नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो जोखिमयुक्त देश हो । हिमनदीहरू वर्षेनि ६० मिटरको दरले खुम्चिँदै छन्, जसले गर्दा हिमतालहरू बन्दै छन् र हिमताल फुटेर बाढी आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
मलाई थाहा छ, यस विषयलाई अपेक्षित महत्त्व दिने गरिएको छैन । संसारभरका सञ्चारमाध्यममा यसले त्यस्तो प्राथमिकता पाएको छैन । त्यसैले, यस महान् देशले सामना गरिरहेका जलवायुसम्बन्धी चापहरूबारे अझै राम्ररी बुझ्न गएको हप्ता मैले राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं सम्मेलन, कोप–२६ को अध्यक्षको हैसियतमा नेपालको भ्रमण गरें ।
आगामी नोभेम्बरमा, संयुक्त अधिराज्यले कोप–२६ भनिने संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वार्ताका लागि १९७ देशलाई ग्लासगो सहरमा स्वागत गर्नेछ । यो सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको भेलापछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वार्ता हो । पेरिसको वार्तामा पूर्वऔद्योगिक तहमै तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममै सीमित गर्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको थियो ।
कोप–२६ मा हामीले जलवायु परिवर्तनले साना देशहरूलाई पर्ने प्रभाव रोक्ने गरी काम गर्नुपर्छ । भूमण्डलीय औसतको तुलनामा दोब्बर दरले हिमालहरू तात्ने क्रमसँगै उच्च तापक्रम र जलवायु परिवर्तनले ल्याउने प्रकोपहरूको संख्या र सघनतामा समेत वृद्धि हुने अनुमान छ । यस्ता असरलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने, तिनले न्यूनतम स्रोत–साधन भएका र अक्सर जलवायु परिवर्तन गराउन न्यूनतम भूमिका भएका मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनलाई असमानुपातिक तरिकाले जोखिममा पार्छन् । हुन पनि, नेपाल संसारकै सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रमध्येको एक हो ।
संसारभर जलवायु परिवर्तनका कारण बसाइँ सर्नेमध्ये ८० प्रतिशत महिला छन् र नेपालमा पनि महिलाहरू विभिन्न अप्ठ्यारामा असमानुपातिक हिसाबले बढी जोखिममा छन् । बाढीपीडितमा पुरुषभन्दा महिला धेरै हुने गरेका छन् । कृषिमा पानीको अभाव र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने नयाँ रोगहरूका कारण अतिरिक्त कामको बोझ पनि महिलाहरूलाई बढी पर्ने गर्छ । त्यसैले महिलाहरू जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा अत्यावश्यक रहिआए पनि उनीहरूको आवाज अक्सर कतै सुनिँदैन । संयुक्त अधिराज्य कोप–२६ को अध्यक्षका नाताले हामी महिलाको आवाज र नेपालको आवाजलाई बुलन्द पार्न चाहन्छौं ।
२५ लाख साना चारपांग्रे सवारीसाधनहरूले एक वर्षमा निकाल्ने धूवाँ बराबर १ करोड १५ लाख टन धूवाँ उत्सर्जन कम गरेर ३२ लाख व्यक्तिलाई जोगाउने जलवायु उत्थानशील भूउपयोग अभ्यासहरूमार्फत चुरे क्षेत्रका जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई संयुक्त अधिराज्यको इन्टरनेसनल क्लाइमेट फाइनान्सले आर्थिक सहयोग गरेको छ । गण्डकी नदी बेसिनमा संयुक्त अधिराज्यको सहयोगले १९ लाख मानिसलाई अचेल संख्या र सघनता दुवैमा बढ्दै गैरहेको जलवायुसम्बद्ध चरम घटनाहरूसँग लड्न सघाउ पुर्‍याउनेछ ।
हामीलाई थाहै छ, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । त्यस कारण हामी नेपालीहरूलाई अझै सहयोग गर्न चाहन्छौं । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ र ग्लासगो सहरको कार्यक्रमको तयारीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई हाम्रो नयाँ ‘एडाप्टेसन एक्सन कोअलिसन’ जस्तै व्यावहारिक परियोजनाहरूमा हातेमालो गर्न आग्रह गर्नेछौं । यो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अघिल्लो महिना जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न सुरु गर्नुभएको थियो । र, पक्कै पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा अप्ठ्यारो प्रभाव सामना गरिरहेका नेपालजस्ता देशहरूमा आर्थिक लगानी पुग्नुपर्छ भन्ने हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
हुन पनि हामीले नेपाललाई कोभिड–१९ बाट पुनर्लाभ गर्दा ‘हरित तरिकाले पुनरुत्थान गर्न’ र १० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न ७ अर्ब ४० करोड पाउन्ड (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) को ग्रिन रिकभरी सपोर्ट प्याकेजका लागि अन्य विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गर्न थालिसकेका छौं । यस प्याकेजले बाढी रोकथाम र वृक्षरोपणजस्ता स्वच्छ ऊर्जा र पानीका परियोजनाहरूमा लगानी गरेर कृषि, वन तथा पर्यटनमा दिगो रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग परिचालन गर्दै नेपाललाई महामारीको तात्कालिक प्रभावबाट दिगो रूपमा पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
मलाई आशा छ, यस समाचारले नेपाललाई अझै अघि बढ्न बल प्रदान गर्नेछ । किनभने, के टु हिमशृंखलाको पहिलो हिउँदे आरोहणबाट हालै फर्किएका नेपालीहरूजस्तै दृढतापूर्वक नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काममा राम्रो काम गरेको उदाहरण पेस गरिसकेको छ । गत डिसेम्बरमा भएको संयुक्त अधिराज्यको जलवायु आकांक्षासम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा सन् २०५० सम्ममा खुद उत्सर्जन शून्यमा झार्न नेपालले गरेको प्रतिबद्धतालाई म न्यानो स्वागत गर्छु । साथै, यसै वर्ष प्रकाशन हुने दीर्घकालीन रणनीतिको पनि म प्रतीक्षामा छु र नेपालले कोप–२६ को प्रतिबद्धताभन्दा बढी गर्ने आशा लिएको छु । स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाजस्ता पहलहरूमार्फत नेपालले संसारलाई बाटो देखाइरहेको छ । यस कार्ययोजनामार्फत नेपालका स्थानीय सरकारहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग अनुकूलन गर्ने सर्वोत्तम उपायहरू पहिचान गरिरहेका छन् । यस्ता योजनामार्फत स्थानीय समुदायहरूले हिमनदी पग्लिने र पहाडमा नयाँ रोगहरू देखा पर्नेदेखि तराईमा बाढी र उच्च तापक्रमसम्मका जलवायु परिवर्तनका अत्यन्त विविध प्रभावको सामना गर्न सक्छन् ।
दिगो पर्यटन तथा पूर्वाधारमा लगानी गरी, नेपाललाई न्यून कार्बन, जलवायु उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरी समावेशी हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने अत्यन्त राम्रो अवसर छ । त्यसैले, म नेपाललाई यस अवसरको सदुपयोग गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु । कोप–२६ मा हामीले आयोजना गर्ने समावेशी जलवायु संवादमा नेपालको आवाज र हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रका यसका पहाडी छिमेकीहरूको आवाज सुनिनेछ भनी म सुनिश्चित गर्छु । यसले नेपाललाई मात्र नभई समग्र एसिया महादेशलाई असर गर्नेछ । दक्षिण एसियामा मात्रै ४ करोड मानिस जलवायु परिवर्तनका कारण गरिबीमा फस्न सक्छन् ।
नेपालले आकर्षक लगानीका अवसरहरू पनि प्रदान गरेको छ । मैले काठमाडौंमा व्यावसायिक तथा लगानीका अगुवाहरूका कुरा सुन्ने अवसर पाएँ र हरित अर्थतन्त्रका लागि सम्भाव्यता आशालाग्दो देखिन्छ । मलाई आशा छ, यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काममा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । ग्रिन ग्रोथ नेपाल कार्यक्रममार्फत संयुक्त अधिराज्यले नेपाललाई कोभिड–१९ को पुनर्लाभमा सहयोग पुर्‍याउन स्वच्छ ऊर्जा, स्मार्ट सहरीकरण र वन्य क्षेत्रका कामहरू यहाँको लगानी बोर्डसँग मिलेर गरिरहेको छ । किनभने हाम्रो ग्रह जोगाउने चुनौती सरकारले मात्रै थेग्न सक्दैन ।
हिमनदीहरू पग्लँदाको असर अवलोकन गर्दा मैले जलवायु परिवर्तनको कठिन यथार्थ आफ्नै आँखाले देखें र हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूमा परिवर्तित जलवायुले पार्न सक्ने विध्वंसकारी प्रभावबारे सुनें । त्यसैले म नेपालीहरूलाई यस चुनौतीसँग लड्न आह्वान गर्छु ।
(बेलायती सांसद शर्मा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं सम्मेलन, कोप–२६ का अध्यक्ष हुन् ।)
प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:३५
'अब राष्ट्रपतिलाई बिदा गर्ने बाटोमा जानुपर्छ'
'उच्च नेतृत्वको स्टेटमेन्टले नै हो हामीलाई अलमलमा पुर्‍याएको'
फाल्गुन १३, २०७७ बबिता शर्मा
देउवा अदालतको निर्णय पर्खने भन्दै अलमलमा परिरहेका बेला रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापालगायत नेता भने लगातार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा बोलिरहे । अब संसद् ब्युँतिएपछि कांग्रेसको भूमिका तथा
संसद्कै भूमिकाबारे प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापासँग कान्तिपुरका लागि बबिता शर्माले बुधबार साँझ गरेको कुराकानी :
नयाँ सरकार गठनका अन्य विकल्प पनि छन् कि ?
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि अस्थिरता बढ्छ, समीकरण बनाउने–भत्काउने र सांसद किनबेच सुरु हुन्छ भनेका छन् । राजनीति त्यता जाने सम्भावना पनि होला नि ?
मेरो कुरा अहिले हाम्रो पार्टी नै सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने हो । अहिले पार्टीलाई सरकारमा जानेतर्फबाट रोक्नुपर्छ । पार्टीलाई रोक्न सक्दा आफूलाई रोक्न सकिहाल्छु । म जाँदिनँ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
संसद् विघटनपछि अनिश्चित बनेको कांग्रेस महाधिवेशन भदौका लागि तय भएको छ । कांग्रेसको ध्यान अब सरकारमा मात्रै हुन्छ कि महाधिवेशनतिर पनि हुन्छ ?
हाम्रो पूरै ध्यान महाधिवेशनतिर हुन्छ । अहिले संसद्‌भित्र आउने चुनौती, अवसर जे छ त्यसबारे संसदीय दलभित्र बसेर जस–जसले काम गर्न पर्ने हो त्यहाँभित्र हुन्छ । अदालतले निर्वाचन हुन्छ भनिदिएको भए पनि निर्वाचन हुँदै हुँदैनथ्यो । त्यसले हाम्रो महाधिवेशन डुब्ने निश्चित थियो ।
हामी भदौमा महाधिवेशन गर्न भ्याउने थिएनौं । किनभने हामीलाई एक डेढ महिना नहुने निर्वाचनले हामीलाई फसाइदिन्थ्यो । तर अब पूरै ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्न सक्छौं । हामीसँग एक दिन पनि तलमाथि सार्ने सुविधा छैन । महाधिवेशन हुन्छ भन्ने जब विश्वास हुन्छ नि, त्यो विश्वासले कांग्रेसका गाँठा आफैँ फुक्दै जान्छन् । महाधिवेशन लाग्यो अब । अलि अगाडि कोभिड–१९ का कारण असाध्यै शंका थियो हामीलाई । अहिले अलि सहज बनाइदिएको छ । अहिले जुलुस, सभा भएका छन् । त्यसैले आज बिहानदेखि कांग्रेसलाई महाधिवेशन लागिसक्यो । वडावडामा महाधिवेशन लाग्यो अब । महाधिवेशनको गाडी अगाडि बढ्यो–बढ्यो । यो कहीँ रोकिन्न ।
प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:३२